3D studio Max resource links များ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > ကွန်ပျူတာ ဆိုင်ရာ( Engineering အပါအ၀င်) > Graphic Design > 3D Studio Max > 3D studio Max resource links များ
View Full Version : 3D studio Max resource links များ
3D studio Max ကိုလေ့လာချင်သူများအတွက် အသုံးဝင်မယ့် site လေးတွေကို အများသိသွားအောင် ဒီနေရာမှာ မျှဝေပေးကြပါဗျာ..
http://tirad.com/tutorials/xsi.htm .....I knew 3dsmax rendering engine types(generic or scanline render,mental ray with Globle illumination,vray with Globle illumination).Most of 3dsmax professional user use for rendering engine with(mental ray with Globle illumination,vray with Globle illumination).
3D studio Max ကို ဘယ်မှာ ဒေါင်းလို့ရနိုင်မလဲ ခင်ဗျာ ..
ဒါမှမဟုတ် .. ရှိတယ်ဆိုရင် ဖိုရမ်မှာ တင်ပေးလို့ ရမလားဗျ ..
ခင်မင်စွာဖြင့် ( တာယာ )
ဒီမှာ Down load လုပ်ကြည်.ပါ ကိုတာယာ...http://www.egydown.com/1683-autodesk-3ds-max-2009.html
ဖြစ်နိုင်၇င် ဒီpost လေးကို 3dmax resource link များ ဆိုတဲ. Topic ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် 3ds max softwares download link ဆိုပြီး topic အသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးပါလားနော်...
ကျွန်တော် နေရာရွေ့ထားပြီးပါပြီ ခင်ဗျာ .. ဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးပါ ။
11-01-2008, 11:24 PM
ကျေးဇူးပါ post လေးသင်.တော်တဲ.နေ၇ာလေး ရွှေ.ပေးတာ။လိုတာ ရှိလဲတောင်းပါ။တတ်နိုင်သမျှ welcome ပါ။
V-Ray Rendering ကို အကောင်းဆုံးရှင်း ပြပေးထားတဲ့ web site ပါ...
Vray အတွက် Tutorials တွေေ၇ာ max files တွေပါပြည်.ပြည်.စုံစုံ တင်ထားပေးပါတယ်။
11-26-2008, 02:49 AM
3ds max လေ့လာရင် material ကပ်တဲ့အခါ UVW map ကိုသေချာပေါက်နားလည်မှ အဆင်ပြေမှာပါ။...
ဒီ link မှာသေသေချာချာ ပြောပြထားပါတယ်။..http://waylon-art.com/uvw_tutorial/uvwtut_01.html
01-02-2009, 11:54 AM
3ds max tutorial ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုပါ....အခန်းလေးတစ်ခုကို basic ကစပြီး wall,window &amp; door အထိ step by step
ရှင်းထားတဲ့ tutorial &quot;pdf&quot; files download ရော web page ပါကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Autodesk 3D Studio Max 2010 x86 and x64 Full DVD 下载 Download
ကျန်တော်ကတော့ 3Ds Max ကိုမလေ့လာဖူးပါဘူး။ ဝါသနာပါလို့တော့ ရသမျှလိုက်စုပါတယ်။
အခု ကျွန်တော်တွေ့တာကတော့ Digital Tutors - Automotive Modeling in 3Ds Max ပါ။
လင့်တွေအားလုံးကတော့ rapidshare ဖြစ်နေတာကြောင့် ကျွန်တော်မဒေါင်းတော့ပဲ တိုက်ရိုက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဆင်ပြေရင်တော့ လူတိုင်းဒေါင်းနိုင်တဲ့ လင့်လေးနဲ့ပြန်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ကွန်နက်ရှင်ကကောင်းပေမဲ့ အကောင့်မဝယ်နိုင်တာကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော်လည်းလိုချင်ပါတယ်။
လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးပါ့မယ် ။ ဒေါင်းပြီး ပြန်တင်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ခဏစောင့်စေချင်ပါတယ် ။
ဟေ့ ... Little3278
လိုချင်တယ်ဆိုလို့ ငါတင်ပေးထားတယ်နော် .. ဘယ်ပျောက်သွားတာလဲ ... ISO file နဲ့ ပါ ။ ပထမ extract လုပ်ပြီးတင်ပေးမလို့ ပဲ ။ ဒါပေမဲ့ ISO ကျတော့ အဆင်ပြေသလို သုံးလို့ ရလို့ ISO file format နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ တင်ပြီးသလောက် ပေးလိုက်ပါတယ် ။
အဲဒီမှာ စတာပဲ ရာမညရေ ..
ခုချိန်ထိ လူလည်မဖြစ်သေးဘူး .. ISO ဖိုင်ဆိုဘယ်လိုသုံးရမှန်းမသိဘူး ..
နည်းနည်းပြောပြဦး ;D အခုတော့ စဒေါင်းနေပြီ
အရင်က ဂိမ်းတစ်ခုဒေါင်းထားတာတောင် ISO ဖြစ်နေလို့ မဆော့ရဘူး ..
သင့်တော်တဲ့နေရာမှာ ISO ဖိုင်ကို ဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာပြောပြပေးဦး ..
Little ရေ .... iso file ကို game ဆော့တဲ့နေရာမှာ virtual drive ကနေ mount ပြီးဆော့ကျပါတယ် ။
တနည်းအားဖြင့် CD ခွေထည့်ရတဲ့ ဂိမ်းမျိုးတွေမှာ CD အစား virtual dirve ဆောက်ပြီး အဲဒီကနေ iso ကို mount ပြီးကစားကျတာပါ ။
အဲဒါဆို DVD/CD Drive လဲမနာတော့ဘူးပေါ့ ။ နောက်တစ်ခုက Bootable CD ခွေကိုတင်ပေးချင်ရင် iso ဖိုင်နဲ့ အများအားဖြင့်တင်ကျပါတယ် ။
၀င်းဒိုးခွေတွေ တင်ပေးချင်ရင် iso ဖိုင်ပြောင်းပြီးမှ တင်ပေးရတာပါ ။ အဲလိုမဟုတ်ရင် ဒီအတိုင်း တင်ပေးလိုက်ရင် ကွန်ပျူတာက boot မခေါ်ပါဘူး ။
ဒီလိုပဲ မိမိရထားတဲ့ iso ကိုလဲ အခွေဘန်းချင်ရင် ဖြစ်ဖြစ် ( for bootable CD/DVD ) ၊ တကယ်လို့ သာမာန်ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေဆိုရင်တော့ extract လုပ်ပြီး အထဲက ဖိုင်တွေကို ရချင်ရင်သုံးပါတယ် ။ ဖောတာနည်းနည်းများသွားပြီး ။ အခုက Little က extract လုပ်ချင်တာဆိုတော့ ရလားတဲ့ iso ဖိုင်ကို right click ထောက်ပြီး Magic ISO --&gt; Extract to ကိုနှိပ်ပြီး မိမိသိမ်းချင်တဲ့ file directory ကိုညွှန်းပေးလိုက်ရင် ဖိုင်တွေ extract လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ် ။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အသုံးပြုနည်းများကိုလဲ အောက်ကလင့်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် ။
Little ရေ .. အကုန်တင်ပေးလိုက်ပြီးနော..် မူရင်းပို့ စ်မှာပဲ တင်ပေးထားတယ် .. မြန်မြန်ဒေါင်းလိုက်အုံးနော် .. လင့်သေကုန်မှာစိုးလို့ ။
အခုလိုလုပ်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
နည်းနည်းတော့ အကူအညီထပ်တောင်းမယ်နော် ..
CD4က sendspace ဖြစ်နေတော့ဒေါင်းမရဘူးဗျ ..
sendspace က ဒီတိုင်းဖွင့်လို့မရဘူး၊ proxy ကျော်ရင်လဲ ဒေါင်းတဲ့အခါ5KB/s ထက်မတက်တော့ဘူး
ifile နဲ့ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေတယ် .. ၅ ဖိုင် parallel ဆွဲရင်တောင် 400 kb/s အထက်ရတော့ အဆင်ပြေတယ်..
CD3 ထိဒေါင်းပြီးသွားပြီ၊ ဖြစ်နိုင်ရင် CD4ကို ifile ကနေပြန်တင်ပေးပါလားဗျာ
အဟင့် ... သူက ဘန်းကျော်ထက်တောင် ဆိုးနေပါလားနော် .. ပြန်တင်ပေးပါ့မယ် .. pls waitalittle ;)
05-09-2009, 05:45 AM
သယ်ရင်းရေ .. အကုန်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပြီးနော် :-* :-*